Nosimbain’Andian’Olona Ireo Fiara Nijanona Nandritra Ny Alin’ny Sarimihetsika “Lisitr’i Schindler” Nojeren’ny Lehilahy Iraniana Iray Niaraka Tamin’ny Nasaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2016 6:24 GMT
Pikantsary avy amin'ny lahatsoratra Facebook-n'i Reza Khandan. “Ny fahasimbana rehetra hita ao amin'ireo sary ireo dia natao tao anatin'ny roa minitra ,” hoy izy nanoratra.
Nahita ny faritra eo akaikiny ao avaratr'i Iran notafihan'andian'olona i Reza Khandan, vadin'ilay Iraniana mpiaro ny zon'olombelona efa nahazo loka, Nasrin Sotoudeh raha teo am-pijerena ny “Lisitr'i Shindler”, horonantsary noderain'ny tsikera momba ny mpandraharaha lehilahy Nazi iray nampiasa ny orinasany hiarovana Jiosy an-jatony.
Voaroba ny fiaran'ireo vahiny nasaina. Vaky ny varavaram-pitaratry ny fiara ary simba ny fananana. Tao anatin'ny minitra vitsy, feno vaky fitaratra ny arabe somary kelikely.
Tamin'ny lahatsoratra ampahibemaso tao amin'ny Facebook, nizara ny antsipirian'ny fanafihana, miaraka amin'ny sary nalaina misy ireo fiara nopotehina i Khandan. Tao anatin'ny 24 ora voalohany, nisy nizara in-95 tao amin'ny Facebook ilay lahatsoratra. Niteraka fanehoan-kevitra marobe maneho fihetseham-po isan-karazany, manomboka amin'ny hatezerana ka hatramin'ny alahelo izany.
Mivaky toy izao ny lahatsarotra tao amin'ny Facebook-n'i Khandan:
Tamin'ny alina, nanofa ny horonantsary “Lisitr'i Schindler” izahay. Tamin'ny ampahany voalohan'ny horonantsary, nahita ny fomba nananihan'ireo mpitsikilo Nazi ny tranon'ny Jiosy izahay. Nahenoana feo tifitifitra sy famonoana ary fanimban-javatra mahatsiravina tao. Afaka mahita ny fomba nihazonana ireo fianakaviana ianao ary nanomboka ny famonoana olona. Mahatsapa feo toa miha-manatona tsikelikely aho, miaraka amin'ny feom-basy sy tabataban'olona tezitra.
Fotoana vitsivitsy taty aoriana, hitanay avy any ivelan'ny tranobe ny tabataba noheverinay fa tao anatin'ny horonantsary. Tonga tao amin'ny fiandohan'ny lalana ny andian'olona ary niaka-nidina ny lalana, manomboka amin'ny fiandohan'ny lalana hatrany amin'ny faran'ny lalana, ka niteraka fahasimbann'ny fiara nijanona tao. Tahaka ny feona poa-basy avy amin'ny horonantsary ny feon'ny varavaram-pitaratry ny fiara vaky.
Minitra vitsy taorian'ny fandosiran'ny andian'olona – rehefa avy nantsoin'ny mponina raiki-tahotra miatrika arabe feno vakivakim-pitaratra sy fiara simba – dia tonga tao an-toerana ny mpitandro ny filaminana sy ny mpamono afo.
Tsy mazava raha nikendry mivantana an'i Khandan na noho ny safidin'ny horonan-tsary na tsia ny fanafihana. Niaina tao anatin'ny fanarahamaso tsy tapaka sy fandrahonana nandritra ny taona maro ny fianakavian'i Reza Khandan sy Nasrin Sotoudeh. Maro tamin'ireo namaky sy nizara ny lahatsoratra antserasera no toa miahiahy fa nomanina hifanojo tamin'ny fijerena ny Lisitr'i Schindler ny fanafihana. Maro ihany koa no nahita izany toy ny iray amin'ireo hetsika maro natao hampitahorana ny fianakaviana sy ny naman'izy ireo.
Eo amin'ny sehatra iraisampirenena, tsy te-hahalala ny fandavàna Famonoana Tambabe nokasain'ny filoha Ahmadinejad hatao malaza kokoa ny fitondran'ny filoha ankehitriny Rouhani. Na izany aza, vao haingana toy ny tamin'ny 2013, nametra-panontaniana ampahibemaso te-handà ny zava-misy ara-tantarany ny mpitarika faratampon'i Iran.